New Dhow Experience Introduced at Victoria Falls
Hideaways has introduced a new dhow experience for visitors at Victoria Falls, Zimbabwe. Guests can enjoy a sunrise or sunset cruise on the Zambezi River on board a traditional handcrafted East African dhow, currently the only one of its kind in Zimbabwe.
Wilderness Safaris is returning to Chikwenya in Zimbabwe’s Mana Pools National Park after having last operated in the area in 2006.
Tourism Interest Increases Across Zimbabwe
Zimbabwe is seeing visitors move beyond the usual popular tourist destinations, thanks to better access and infrastructure.
Machaba Safaris Open New Verney’s Camp
Machaba Safaris’ brand new Verney’s Camp opened in May in a remote 10,000 ha private concession in the south eastern section of Zimbabwe’s iconic Hwange National Park.
VFS Global to Promote Zimbabwe in India and GCC
In a move to enhance destination awareness and foster market visibility, Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has appointed VFS Global to promote Zimbabwe as a preferred tourism destination in both India and GCC region.
Zimbabwe and Zambia Create Joint Tourism Committee
Zimbabwe and Zambia have agreed to set up a joint tourism facilitation committee to coordinate combined marketing campaigns and deliberate on issues affecting the sector.
Zimbabwe Reveals Tourism Package to Promote Historical Sites
Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) initiated a programme to empower rural communities through its recently revealed heritage tourism programme, which aims to create jobs and improve livelihoods.
Zimbabwe Creates Own Airbnb Concept
Zimbabwe’s Ministry of Tourism is on a drive to register small lodges, households, restaurants and other eateries, in an effort to offer home stays and eateries for international tourists to choose from when visiting the country.